WEYDIIMO AAN JAWAABO U WAAYAY
Sagaalkii fiidnimo ayeey qiyaastii ahayd, markii aan maalintii dorraad diyaaraddii aan saarnaa ay soo cagadhigatay garoonka caalamiga ah ee lagu magacaabo Heathrow Airport kuna yaala xarunta dalka England ee London.
London Heathrow Airport: Sawirka Google Search
Waxyar kadib, waxaan u soo dhaadhacay jihada tareenada ee dhulka hoostiisa mara ee isna ku yaala xagga hoose ee garoonka. Annigoo daal aan sidaas u sii weynayn aan jirkeega ka dareemayo ayaan dalaq hal mar iri tareen u socday bartamaha London. Markaan socono 10 daqiiqo wax ka yar ayunbaa tareenkii hal mar istaagay, dabadeedna waxaa xigtay ninkii tareenka waday oo amar ku siiyay dadka inay ka daataan tareenka.
Anniga iyo dadkii faraha badnaa ee saarnaa tareenka oo yaabban ayunbaa si dhaqso leh uga daadanay tareenka, innagoo markaas aanan ka warqabin ciladda keentay inuu tareenka istaago, oo dadkii saarnaa ay hal mar ka soo deggaan. Intaas waxaa xigtay, markay indhahayaga saareen dad khaas oo tareenkii intay gudaha u galeen ku dhaqaaqay baaritaan qaadatay wax ka badan saacad.
Nin baryaraa oo ka mid ahaa shaqaalaha tareennada oo uu iila muuqaal ekaa inuu ka soo jeeday Hindiya ama Bakistaan ayaan weydiiyay sababtan dib-u-dhaca keentay, wuxuuna isagoo mashquulsan, eegayana meelo kala duwan si fudud iigu yiri “waa arrin la xiriirta nabadgelyada, waxaa laga cabsaday in tareenka lagu soo qariyay waxyaabaha qarxa...” Hadalladaas waxay si weyn u cabsi geliyeen naftayda, waxaana is iri amay ka wanaagsanaan lahayd inaanan ninkan weydiinin su’aashii aan weydiiyay, inkastoo haddana aan hadalkiisa ku fasiray inay tani ka mid tahay cabsida ku soo korodhay dalalka uu ka mid yahay UK wixii ka danbeeyay 11-kii sibteembar sannadkii 2001.
Dadkii aan isla saareen tareenka ayaan la wadaagay xaaladdan cabsi, waxaana fariistay meel ay fadhiyeen dad u badan caddaan, oo aan u fahmay inay badankooda ka kala yimaadeen dalal kala duwan oo EU-da ka mid ah. Mid ka mid ah dadkaas, oo xaggeyga soo xigay ayaa si dabacsan ii salaamay, salaantii ayaan ka qaaday, wuxuuna durbadiiba intaa ii raaciyay “dalkeed ka soo jeeddaa?”. Inkastoo aan hadal badan xiiso u sii hayn, haddana waxaan ugu jawaabay “waxaan ka imid dalka aanan lahayn dowlad dhexe wax kabadan 13 sanno”, kadibna waxaan ku sii mashquulay duco aan Alle ka baryay inuu meeshaan u socday igu nabad geeyo. Markale ayuu ninkii igu yiri “iga raalli ahow, waxaan ku weydiiyay ma ii sheegi kartaa dalka aanan dowladda lahayn wax ka badan 13 sanno, sideese u dhici kartaa”.
Waxaan misna u sheegay inuu dalkaasi nasiib darrada haysato ay tahay Somaliya, inkastoo aan isku dayay inaan is hilmaansiiyo su’aasha qaybteeda labaad ee ah sababta keentay dowlad la’aanta Soomaaliya.
Qarnigii 9aad iyo 10aad ee A.D. waxaa Iceland degay laajiyiin ldhalashadoodu tahay Norwegian, Scottish iyo Irish. 300 sano oo xoriyad ay haysatey Iceland waxaa ku xigey xukunka ay xukumeen Norway iyo Denmark. Folkaano aad u weyn oo ka ka qarxay sannadkii 1875 ayaa burburiyey dhaqaalihii Iceland kaas oo sababay macaluul aad u badan oo soo foodsaartay dadka Iceland taas oo khasab ka dhigtay in dad badan oo dalkaas u dhashay ay u qaxaan dalalka Canada iyo Maraykanka. Iceland waxay sannadkii 1874 waxay ka heleen Denmark in ay siisay is xukun hoose oo xadidan, kaddib waxay Iceland xorriyad buuxda heshay sannadkii 1944. Waxaa hadda lagu tiriyaa wadamada xagga aqoonta, qaab dhismeedka bulashada iyo dakhligaba ugu fiican dunida.
ISHA: World Factbook
Hase ahaatee, markii uu igu celceliyay inaan u sheego sababta keentay dowlad la’aanta Soomaaliya ayaan ugu jawaabay iyadoo ay ugu wacan tahay dagaalkii sokeeye ee ka billowday dhammaadkii 1990-kii. Dhinaca kale, intuusan igu soo boobin su’aal kale ayaan horta weydiiyay dalka uu isaga ka soo jeedo, wuxuuna ii sheegay inuu ka yimid dalka Iceland ama deenishka ay u yaqaaniin Island. Markuu sidaas yiri, ayaan si wacan u fahmay sababta uu sidan jaahilka uga yahay Soomaaliya iyo dadkeeda Soomaalida.
Annigoo la yaabban furfurnaanta badan iyo su’aalaha iska daba imaanaya ee uu i weydiinayo ninkan ayuu markale igu soo tuuray su’aal maantoo dhan ka cararayay inuu i weydiiyo, taasoo ahayd “maxay soomaalida isu laynayaan??!!”. Waxaan si xishood ku jirto ku iri, garan maayo sababta ay isu baabi’inayaan dadkii wada dhashay ee Soomaaliyeed.
Waa su’aal ay dadka aan soomaalida ahayn inay weydiiyaan ay aad ugu fududdahay, hase ahaatee in si qeexan looga jawaab bixiyo ay aad ugu adag tahay waxgaradka iyo dadka damiirka soomaalinimada ay ku danbeyso.
Waa hubaal inay tahay su’aal aan jawaab lahayn. Waa xaqiiqo inay su’aashan ay igala dhigan tahay su’aalaha iigu adkaanta badan ka jawaabiddeeda. Maxay isu laynayaan Soomaalida? Qarankoodii iyo sharaftoodii maxay gacmahooda ugu dumiyeen? Maxay misna u heshiin la’yihiin, kadib 13 sanno oo aynan waxna isugula harin?.
Isma arki karaan iyaga, waxay isku haystaana ma jiraan. Waa wax aad loola yaabo. Dhowr iyo toban shirar ay isugu yimaadeen, wax natiijo ah oo taaban karana kama soo bixin. Dadyowga dalalkooda ay nabadda ka jiraan, xaq ayeey ugu leeyihiin inay la yaabaan dadkan u oomman dhiigga walaalahooda soomaaliyeed. Saddex iyo toban sanno kadib ayaa weli waxaa Soomaaliya ka socda dagaalkii sokeeye, haba ugu sii badate koonfurta Soomaaliya. Towfiiqda yaad mooddaa in laga qaaday. Ugu danbeyntii, waxaan Soomaalida Ilaahay uga baryayaa inuu dhexdooda dhigo jaceyl iyo walaaltinimo dhab ah, siiyana dowlad caadil ah oo ay ku hilmaamaan colaaddii sannadaha badan dhexdooda ka jirtay.
Faafin: July 27, 2003